Maqaal: Dowladnimada Soomaaliya oo Hana Qaadey, By Asadnaa Suudi. – Radio Daljir
Abriil 21, 2018 1:06 g 1
Barnaamijka Horumarinta Mashaariicda Yaan la Siyaasadeyn! wuxuu ahaa Cuqul siyaasadeed iyo Madax salaax dhaqaale Oo Madaxweyne Hassan Sheikh iyo Cumar Abdirashiid ku naas Nuujin Jirey maamulka Soomaliland si khaas ah iyagoo danahooda gaarka ah ka hormariyey danta Dalka iyo DadkaTaasoo Dhaawac iyo gaf Ku ahayd haykalka iyo Hanaqaadka Dowladnimada Soomaaliya waana Sababta markii dambe uu Maamulka Somaliland iyo Hogaamiyihiisii Siilaanyo ula soo baxey Qar iska Xoornimo iyo gabi dhacleyn siyaasadeed taasoo Fududeeysey Dowlado kale iney Maalin Cad Ku Hadaaqaan wax Aysan Sharafta iyo Qaranimada Soomaliya gayin.
Ugu Dambeyntii waxaan Xasuus reeba idinka Dhigeyaa erayadii abwaan samatar baxnaan “hadba waxaan la xarakaadayaa waa xogtaan helaye, waakaa jirkaygii xugnaa soo xankaakubaye, xoonkii shinnida doonayaye xoonbax oranaayey, aan xabagbarshiyo awlallada cidi la xaalaynnin, xawliga durduradaan ka biqi xeeb inaan tago’e“. hadaba yeesan idinka hoos bixin in wadamada Aduunka si kasta oo Laysu neceb yahay ama Dano gaar ah la kala Leeyahey hadana Waxaa Taal shuruuc iyo Diblomaasiyad aan la Dhaafi karin.
Abdinasib Hassan jama 1 year ago
Qoraalkani wuxuu mudan yahay loo Mahad Celiyo
Qoraaga oo isku hawlay tusmaynta dawlad iyo
Sharafta ay leedahay iyo duliga aan qarsoonayn ee
Dawlad la,aanta Mahadsanid